Tag: kufunga mepu | Martech Zone
Tag: kufunga mepu
Muvhuro, Ndira 22, 2018 Muvhuro, Ndira 22, 2018 Douglas Karr
Mangwanani ano, ndanga ndichifona naMiri Qualfi kubva kuFanbytes uye anga aronga dzimwe pfungwa dzekuuya kweMartech Interviews podcast paSnapchat. Chishandiso chaakavhura chaive chakanakisa - Coggle. Coggle chishandiso chepamhepo chekugadzira nekugovana mepu dzepfungwa. Inoshanda online mubrowser yako: hapana chekutora kana kuisa. Kunyangwe iwe uri kutora zvinyorwa, kufunga, kuronga, kana kuita chimwe chinhu chinotyisa kugadzira, zviri nyore kwazvo kuona